Masinina amboara taratasy, masinina vita amin'ny taratasy - Masinina Chengda
Masinina amboara taratasy
Masinina takelaka taratasy
Masinina rindrina roa
Milina fanoratana taratasy
Masinina Donner Box
Masinina Tube mivantana
Masinina amboara taratasy SMD-90
Masinina havia taratasy PLM-60
Taratasy azo sintomina PLM-80 ...
Haingam-pandeha haingam-pandeha ...
Henting Chengda Machinary Co., Ltd dia niorina tamin'ny taona 1998. Tao anatin'ny 20 taona lasa, Chengda dia mpamokatra manokana amin'ny famokarana fitaovana kaopy taratasy. Ny vokatra dia manarona ny kaopy taratasy mandeha ho azy, vilia baolina, sarom-baravarana ary fantsom-pamokarana fantsom-bozaka sy milina fanaraha-maso.
Miaraka amin'ny departemanta R&D azy manokana, Chengda dia manana teknolojia mitarika amin'ny milina vokatra taratasy. Fanatsarana tsy tapaka, hevitra vaovao ary fitaovana maoderina izay mitondra ny masinina Chengda amin'ny kalitao miavaka manerantany…
20 taona mahery ny traikefa
Vokatra mihoatra ny 10
Ho avy ny kaomandy famerana plastika vaovao!
Ny mpitondra tenin'ny vaomieram-pirenena misahana ny fampandrosoana sy ny fanavaozana Meng Wei dia nilaza tamin'ny faha-19 fa amin'ny 2020, ny fireneko no hitarika amin'ny fandrarana sy ny famerana ny famokarana, ny varotra ary ny fampiasana vokatra plastika sasany any amin'ny faritra sy faritra sasany. Nilaza izy fa araka ny "Opinions on Next Stre ...
No.1 Jeans Road, tanàna Henting, faritanin'i Zhejiang, Sina.
Antsoy izahay izao: + 86-573-87985826